ကြယ်ပြာရဲ့ အိမ်ကလေး: November 2013
ဟိုးတောင်ဆီမှာ မိုးတွေညို့လာပြီဆိုရင် …..
ငါကအလွမ်းတွေ အဖျားခတ်နေတုန်း …
မင်းကတော့ နောက်ရင်ခွင်တစ်ခုမှာ ပျော်နေလောက်ပြီပေါ့ ….
ကောင်းကင်ကငို တိမ်တွေပြိုကျလာပြီဆိုရင်လေ ….
အတူဆုံချိန်လေးတွေ ပြန်တမ်းတ၊ မှန်းဆလွမ်းရင်း …..
ငါ့ရင်ထဲမှာလည်း တိမ်ညိုတွေတရိပ်ရိပ်ပြိုဆင်းရင်းနဲ့ပေါ့ …..
မင်းကတော့ နောက်ရင်ခွင်မှာ ခိုးခိုးခစ်ခစ်ရယ်ရင်း မူနွဲ့နေမလားပဲကွယ် ….
ဘာကြောင့်ဝေးရတာလဲ၊ ဘာကြောင့်ထားခဲ့တာလဲ ဆိုတာ
အကြိမ်ကြိမ်တွေးရင်း၊ မေးရင်း နဲ့ ခေါင်းတွေချာချာလည်
ကော်ဖီသောက်ပြီး မူးနေတဲ့ ကောင်က ငါပါ ……
မှော်ဆန်ဆန် အပြုံးတွေနဲ့ ညှို့ယူ
မင်းပြောတော့ “ငါမရှိလို့မဖြစ်ဘူး” ဆို
တကယ်တမ်းကျတော့ “မင်းမရှိလို့မဖြစ်ခဲ့တာ” ငါဆိုတဲ့ကောင်ပါ ….
မင်းကတော့ ဒီစကားတခွန်းနဲ့ပဲ နောက်လူရဲ့ အချစ်တွေမြှားယူနေလောက်ရောပေါ့ ….
Posted by ကြယ်ပြာ at 7:44 AM 1 comments Links to this post
"မင်းနဲ့တို့ ဝေးများဝေးရင် ...."
ခြွေချခံလိုက်ရတဲ့ (သို့) အလိုလိုကြွေကျသွားတဲ့ သစ်ရွက်လေးက
သံယောဇဉ်ဆိုတာ ဘယ်နေရာမှာ ကျကျန်ခဲ့သလဲတဲ့လေ ……
ရွက်ကြွေတောမှာတော့ မလွမ်းမောပါစေနဲ့ တဲ့ …
သင့်မှာ နားတစ်စုံသာရှိခဲ့ရင် …..
သစ်ရွက်ရှိုက်သံတွေကို တချက်နားစွင့်ပေးပါ ….
ရွက်ကျန်တွေကို အပြီးသတ်ခါမထုတ်ခင်ထိပေါ့ …
Posted by ကြယ်ပြာ at 6:13 AM0comments Links to this post
တကူးတကလဲ မတောင်းခဲ့ဖူးဘူး …
နေရာဆိုတာ ပေးတိုင်း၊တောင်းတိုင်း ရကောင်းစရာမှ မဟုတ်တာ …
ငါကမ္ဘာတစ်ခုလုံး ဘယ်တော့များလင်းနိုင်ပါ့မလဲ …
မလိုချင်ပါဘူး အဲ့ဒီမနာလိုဝန်တိုမှုတွေ …
တပ်မက်စိတ်ထက် စွန့်လွှတ်စိတ်က ပိုမြင့်မြတ်၊ မမြတ်?
Posted by ကြယ်ပြာ at 8:20 AM 1 comments Links to this post
မြင်သော်လည်း ခံစားချက်မဲ့ ရင်ဘတ်
ထိသော်လည်း အ သွား တဲ့ အာရုံကြောတွေ
နယူတန်ရဲ့ သီအိုရီမှားသွားတယ် …
Posted by ကြယ်ပြာ at 8:13 AM0comments Links to this post
အချစ်တွေကို အိုးတစ်လုံးထဲ အတူတူ စုထည့်ကြရအောင်ပါ ..
အေးခဲသွားတိုင်း ပြန်ပြန်နွှေးကြတာပေါ့ …
ခမ်းမသွားအောင် မီးမျှဖို့တော့ ဂရုစိုက်ရလိမ့်မယ်။
အပြုံးတွေကို အတူတူ ထုဆစ် အပြစ်ဆိုတာ မမြင်ခဲ့ကြတဲ့အချိန်တွေကို
မံမီရုပ်လို သိမ်းထုတ် မပုပ်မသိုးအောင် စီမံကြရအောင်
လိုချိန်မှာ ပြန်အသက်သွင်းကြမယ်လေ ….
မနီးမဝေးက (၂)နှစ်၊ မနီး မနီးက (၂) နှစ်
အကြင်နာတွေကတော့ တစ်ဆစ်ပြီးတစ်ဆစ် လျော့လျော့သွားလေသလား?
ကိုယ့်လမ်းနဲ့ကိုယ် မှန်တော့နေကြသေးတာပဲ …
မှားနေတာက လမ်းပဲဖြစ်မယ် ထင်ပါရဲ့ ….
နင်က ပြောတယ် ငါ့စိတ်တွေ က အတက်အကျများတယ်တဲ့ …
ငါက ပြောတယ် နင်က ငါ့ကို ဂရုမှ မစိုက်တာလို့ ….
နင်ကပြန်ပြောတယ် သူက မပြောင်းမလဲ အရင်လိုချစ်ဆဲတဲ့ …
ဒါနဲ့ပဲ ငါက …. ရေထဲ ပျော်ဝင်သွားတဲ့ ဆားတစ်ပွင့်လို ….
ကဲ .. .အရာရာ အဆင်သင့်ဖြစ်ရင် တစ် က ပြန် စ ကြရအောင်
Posted by ကြယ်ပြာ at 7:55 AM0comments Links to this post
Credit to www.beaverislandforum.com for Image
တိမ်တွေဖုံးအုပ် သိမ်းထုပ်ခံထားရတဲ့ လတစ်စင်း
သိက္ခာကျနေလိုက်ပုံများ အလင်းတစ်စတောင် တောက်ပြခွင့်မရဘူးတဲ့….
ကြယ်တွေ တစ်စင်းပြီးတစ်စင်း ဖြတ်ပျံသွားတဲ့အခါတိုင်း
သူ့ကောင်းကင်ကို သူကိုယ်တိုင် အလင်းမပေးနိုင်လို့ ငိုကြွေးသတဲ့လေ …..
အလင်းတစ်စ ပြင်းပြင်းပြပြ ချပြချင်တာတောင်
သူ့ကောင်းကင်က ကြယ်တွေအစုံနဲ့ ကပွဲတက်နေသတဲ့ …..
ကဲ … ဘယ်လိုလုပ်မလဲ???
နေတစ်စင်းရဲ့ တောက်ပမှုအောက် အလင်းပျောက်ရပြန်တယ် …..
သူ့ကောင်းကင်ရဲ့ အနာဂတ်ညအတွက် အလင်းတစ်စချပြဖို့
သူကတော့ အသင့်ဖြစ်မြဲ ဖြစ်ဆဲပါပဲ………
Posted by ကြယ်ပြာ at 11:02 AM0comments Links to this post
ခဏခဏ သေသေသွားတတ်တဲ့ စိတ်ကူးအချို့အတွက်
မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာ ထားမကောင်းတဲ့အရာ ….
အပွင့်ကိုလိုချင်လို့ အပင်ကို စိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ပေမယ့်
ကျိုးပဲ့ ပျက်စီးသွားမှာတော့ စိုးရိမ်မိတာပေါ့လေ …
အပြစ်တင်လဲ ခံရမှာပဲ …
ဘေးလူအတွက် ရယ်စရာဖြစ်ချင်လဲ ဖြစ်မှာပေါ့ …..
ငါ့အတွက်တော့ အခမ်းနားဆုံးချစ်ခြင်းတစ်ခု ဆိုတာ
Posted by ကြယ်ပြာ at 4:40 AM0comments Links to this post
သူ့ကို ချစ်သောစိတ်၊ သတိရသောစိတ်တို့သည်
အလွမ်းပန်းတို့ကို အဆုပ်လိုက်၊အခဲလိုက် ပွင့်စေ၏။
ရင်တစ်ခုလုံး ပန်းပွင့်တို့ ဖုံးလွှမ်းသောအခါတွင်မှ
သူ့ကို ဘယ်လောက် နှစ်သက်စုံမက်ကြောင်း၊
ပန်းရနံ့တို့မှ တဆင့် သူ့ဆီ သယ်ဆောင်စေ၏။
Posted by ကြယ်ပြာ at 7:06 AM0comments Links to this post
ကိုယ်မသတ်မှတ်လဲ ပန်းတိုင်တစ်ခုစီတော့ ဘ၀က သတ်မှတ်ပေးပြီးသား …
ရယ်မလား၊ငိုမလား ပြုံးမလား၊မဲ့မလား ဆိုတာတော့ ကိုယ်တိုင်ရွေးပေါ့ ….
ဘာတွေများ ထပ်ပြီးပိုလိုချင်နေမိပါလိမ့် …
အချစ်လား …. သွားစမ်းပါကွယ် ခပ်ဝေးဝေးကို ….
လိုတော့မှ လှမ်းခေါ်လိုက်မယ် …..
ခပ်ရင့်ရင့် တစ်ချက်ပြုံးလိုက်စမ်းပါ ….
ဘ၀မှာ အားလုံးပြီးပြည့်စုံနေသလို ဘာလိုလိုပေါ့ …
အိုဗာတော့ သိပ်မဖြစ်စေနဲ့ ….
ယုံကြည်မှုလွန်ရင်လဲ နောက်ပြန်လဲတတ်သတဲ့ …
ကဲ …. တော်လောက်ပြီလေ …
ခပ်နုနု အပြုံးလေးတွေတော့ ဆင်မြန်းသွားဖို့ မမေ့စေနဲ့ …..
(၁၃၊ နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၁၃ နံနက် ၁၀း၁၁)
Posted by ကြယ်ပြာ at 7:38 AM2comments Links to this post